Kedu ihe bụ snow: njirimara, nhazi na ụdị | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 17/09/2021 10:00 | Ihe gbasara ihu igwe
N'elu ala ikuku bụ ebe ihe niile meteorological na -eme. Otu n'ime ha bụ snow. Ọtụtụ ndị amaghị nke ọma kedu ihe bụ snow n'ozuzu ya, ebe ọ bụ na ha amaghị nhazi ya, njirimara ya na nsonaazụ ya nke ọma. A na -akpọkwa snow mmiri mmiri. Ọ bụghị ihe ọ bụla karịa mmiri siri ike nke na -ada n'igwe ojii ozugbo. Snowflakes bụ kristal ice, mgbe ha dara n'elu ụwa ha na -eji ihe mkpuchi mara mma kpuchie ihe niile.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe snow bụ, ihe njiri mara ya, otu o si amalite na ụfọdụ ịmata ihe.
1 Gịnị bụ snow
3 Snowdị snow
4 Mmetụta nke ifufe na snow
A maara ọdịda nke snow dị ka snowfall. Ọdịiche a bụ ihe a na -ahụkarị n'ọtụtụ mpaghara ejiri obere okpomọkụ mara (n'ozuzu oyi). Mgbe snow dị arọ ọ na -ebibikarị akụrụngwa obodo ma na -akpaghasị ọrụ kwa ụbọchị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọtụtụ oge. Ọdịdị nke snowflakes bụ fractal. Fractals bụ ụdị geometric a na -emegharị na akpịrịkpa dị iche iche, na -emepụta mmetụta anya pụrụ iche.
Ọtụtụ obodo na -eji snow dị ka ebe kachasị amasị ndị njem (dịka ọmụmaatụ, Sierra Nevada). N'ihi oke mmiri ozuzo na -ada na ebe ndị a, ị nwere ike ịme egwuregwu dị iche iche dị ka ski ma ọ bụ snowboarding. Na mgbakwunye, ubi snow na -enye echiche dị egwu, nke nwere ike ịdọta ọtụtụ ndị njem wee mepụta nnukwu uru.
Snow bụ obere kristal nke mmiri kpụkọrọ akpụkọ A na -emepụta ya site na ịmịkọrọ ụmụ irighiri mmiri na troposphere nke dị n'elu. Mgbe ụmụ irighiri mmiri ndị a na -akụkọ, ha na -agbakọta wee mepụta snowflake. Mgbe ịdị arọ nke snowflake dị ukwuu karịa nguzogide nke ikuku, ọ ga -ada.
Ọnọdụ okpomọkụ nke kpụrụ snowflakes ga -adị n'okpuru efu. Usoro nhazi bụ nke snow ma ọ bụ akụ mmiri igwe. Nanị ihe dị iche n'etiti ha bụ okpomọkụ e guzobere.
Mgbe snow dara n’ala, ọ na -agbakọta ma kpokọta. Ọ bụrụhaala na ọnọdụ ihu igwe na -adị n'okpuru efu, snow ga -adịgide ma na -echekwa ya. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ ebili, snowflakes ga -amalite agbaze. Ọnọdụ okpomọkụ nke snowflakes na -etolite na -abụkarị -5 Celsius. Ọ nwere ike itolite na oke okpomọkụ, mana ọ na -amalitekarị karịa -5 Celsius.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị mmadụ na -ejikọ snow na oke oyi, mana n'eziokwu, ọtụtụ snow na -eme mgbe ọnọdụ ikuku dị 9 Celsius ma ọ bụ karịa. Nke a bụ n'ihi na anaghị atụle ihe dị oke mkpa: iru mmiri gburugburu. Iru mmiri bụ ihe dị mkpa maka ọnụnọ snow n'otu ebe. Ọ bụrụ na ihu igwe kpọrọ nkụ nke ukwuu, ọ gaghị ada snow ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala. Ọmụmaatụ nke a bụ ndagwurugwu akọrọ nke Antarctica, ebe enwere ice mana anaghị enwe snow.
Mgbe ụfọdụ snow na -ata. Ọ bụ maka oge nke snow kpụrụ site na iru mmiri gburugburu ebe obibi na -agafe n'ọtụtụ ikuku akọrọ, na -atụgharị snowflakes ka ọ bụrụ uzuzu nke na -anaghị arapara ebe ọ bụla, dị mma maka ịme egwuregwu na snow. Snow mgbe snow dara nwere akụkụ dị iche iche n'ihi mmepe nke mmetụta ihu igwe, ma enwere ikuku siri ike, ịgbaze snow, wdg.
Ntu oyi: Ọ bụ ụdị snow nke na -adapụta na ala. Mgbe okpomọkụ dị n'okpuru efu na iru mmiri dị elu, mmiri dị n'elu ụwa na -ajụ oyi ma na -akpụzi ntu oyi. Mmiri a na -agbakọba n'ụzọ bụ isi n'ikuku wee nwee ike ibuga mmiri na osisi na okwute n'elu ụwa. Enwere ike ịkpụpụta flakes buru ibu ma ọ bụ ọnya siri ike.
Icy ntu oyi: ihe dị iche n'etiti nke a na nke gara aga bụ na snow a na -emepụta ụdị kristal doro anya, dị ka akwụkwọ. Usoro nhazi ya dị iche na nke oke ntu oyi. Ọ bụ usoro sublimation ka etinyere ya.
Ntụ ntụ snow: A na -amata ụdị snow a site n'ịdị na -enwu enwu. N'ihi ọdịiche okpomọkụ dị n'etiti nsọtụ abụọ na etiti kristal ahụ, ọ na -efunahụ ịdị n'otu. Ụdị snow a nwere ike mịpụ nke ọma na skis.
Mmiri snow: A na-akpụpụta ụdị snow a site na-aga n'ihu na-agbaze ma na-ajụkwa oyi na mpaghara nwere obere okpomọkụ mana anwụ na-adị. Snow nwere kristal gbara gburugburu.
Snow na -apụ ngwa ngwa: ụdị snow a na -adịkarị na mmiri. Ọ nwere uwe dị nro, nke dị mmiri mmiri na -enweghị nnukwu nguzogide. Ụdị snow a nwere ike ibute mmiri mwụda mmiri ma ọ bụ mbadamba efere. Ọ na -emekarị na mpaghara obere mmiri ozuzo.
Snow na -ada ada: Ụdị snow a na -apụta mgbe elu mmiri gbazere na -ajụ oyi wee mepụta akwa siri ike. Ọnọdụ ndị na -ebute nguzobe snow a bụ ikuku na -ekpo ọkụ, ntụpọ n'elu mmiri, ọdịdị anyanwụ na mmiri ozuzo. Dị ka ọ na -adịkarị, mgbe ski ma ọ bụ buut gafere, oyi akwa nke na -eme na -adị gịrịgịrị ma gbajie. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe mmiri na -ezo, oke okwute na -akpụpụta ma mmiri ahụ na -esi na snow adapụ wee kpọnwụọ. Ụdị skaab dị ize ndụ n'ihi na ọ na -amị amị. Ụdị snow a na -emekarị na mpaghara na oge ebe mmiri na -ezo.
Mmetụta nke ifufe na snow
Ifufe na -enwe mmetụta nke nkewasị, mkpakọ na nchikota na elu snow niile. Mgbe ikuku na -ewetakwu ọkụ, mmetụta nchịkọta nke snow ka mma. Ọ bụ ezie na okpomọkụ nke ikuku na -enye ezughị iji gbazee snow, ọ nwere ike ime ka snow sie ike site na nrụrụ. Ọ bụrụ na oyi akwa dị ala na -agbaji nke ukwuu, ogwe ikuku ndị a kpụrụ akpụ nwere ike ịgbaji. Ọ dị ka nke a mgbe nnukwu mmiri na -apụta.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe snow bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ snow